I-AdSense: Ungayisusa kanjani iNdawo kusuka kuzikhangiso ezizenzakalelayo | Martech Zone
Akungabazeki ukuthi noma ngubani ovakashela isiza sami akaboni ukuthi ngenza imali ngaleli sayithi ngeGoogle Adsense. Ngikhumbula okokuqala ngizwa i-Adsense ichazwa, lo muntu wathi kwakunguye Inhlalakahle yeWebmaster. Ngijwayele ukuvuma, ayikhokhi nezindleko zami zokubamba. Kodwa-ke, ngiyakwazisa ukukhipha izindleko zesiza sami futhi i-Adsense ibhekiswe kahle endleleni yabo ngezikhangiso ezifanele.
Lokho kusho ukuthi, emuva kwesikhashana ngishintshe izilungiselelo zami ze-Adsense ngokususa zonke izifunda ezikhona kusayithi lami futhi, esikhundleni salokho, nginika i-Adsense amandla okwandisa lapho ibeka khona izikhangiso.
Ngivumele i-Adsense yandisa ukubekwa kwezikhangiso izinyanga ezimbalwa futhi ngabona ukuphakama kwemali engenayo yami yanyanga zonke. Kodwa-ke, isibhengezo esikhulu esibekwa iGoogle ngenhla igalari yami ehamba phambili yezihloko iyabheda ngokuphelele:
Ngokuphikisana nalokho ongakucabanga, Izikhangiso ezizenzakalelayo ayikuvumeli ukulawula izifunda kanye nenani lezikhangiso i-Google ezibeka kusayithi lakho. Uma ungena ngemvume ku-Google Adsense, khetha Izikhangiso> Ukubuka konke:
Kwiphaneli engakwesokudla, kunenkinobho yokuhlela ekushicilelweni kwakho. Uma uchofoza leyo nkinobho, ikhasi livuleka ngazo zombili ideskithophu neselula yesayithi lakho lapho ungabona khona lapho i-Google ifaka khona izikhangiso zakho. Futhi, ngaphezu kwakho konke, ungasusa isifunda ngokuphelele. Ngikwenze lokhu nge-banner header banner ebithatha indawo yami yonke.
Ngenkathi lelo bhanna lingashayela imali ethe xaxa yokuchofoza, kubi kakhulu kulwazi lwami lomsebenzisi futhi kungenza ngibukeke sengathi ngingu-spammer nje ozama ukwenza inzuzo. Ngisuse isifunda.
Ngiphinde nganciphisa inani elincane lezikhangiso ekhasini ngalinye laya ku-4. Ungakuthola esigabeni sokulayisha isikhangiso ngakwesokunene nohlangothi. 4 ubuncane abavumela ukuthi ubukhethe.
Kunezinye izinketho ongazivumela futhi uzikhubaze kusayithi lakho, kufaka phakathi izikhangiso ezingaphakathi kwekhasi, okuqukethwe okuhambisanayo, izikhangiso ze-anchor, nezikhangiso ze-vignette eziyizikhangiso zesikrini esigcwele ezivela phakathi kwemithwalo yamakhasi.
Njengomshicileli ohlinzeka ngocwaningo lwamahhala nolwazi, ngethemba ukuthi awunandaba nokuthi ngenza imali ngesiza sami. Ngasikhathi sinye, angifuni ukucasula abantu futhi ngibayekise ukubuya!
Tags: izikhangiso ezizenzakalelayoi-Google adsenseindlelaukwenza imali ngokushicilelwaukhokha ngokuchofoza ngokukodwasusa indawo